Messi ma ka qeyb qaadan doonaa kulanka Barcelona ay bari kula ciyaari doonto kooxda Huesca horyaalka La Liga??? – Gool FM
Shaxda rasmiga ah kulanka Kooxaha Southampton iyo Manchester United ee horyaalka Premier League oo la shaaciyey
Shaxda rasmiga ah kulanka Kooxaha Barcelona iyo Osasuna ee horyaalka La Liga oo la shaaciyey
Kooxda Arsenal oo diyaar u ah inay iska iibiso mid ka mid ah Weeraryahannadeeda waa weyn
Horudhac: Arsenal vs Wolverhampton Wanderers… (Gunners oo adkaatay mid ka mid ah shanteedii kulan ee ugu dambeeyey Premier League)
Horudhac: Chelsea vs Tottenham Hotspur… (Wax waliba oo aad uga baahan tahay kulanka caawa ee London derby)
Horudhac: Southampton vs Manchester United… (Macallin Ole iyo wiilashiisa oo booqanaya koox aan laga badin 7 kulan)
Horudhac: Barcelona vs Osasuna… (Kooxda Catalan oo doonaysa inay dib ugu soo laabato wadada guusha ee horyaalka La Liga)
Deportivo Alaves oo guul ka soo heshay kooxda Real Madrid oo ay ku booqatay garoonka Alfredo Di Stefano… +SAWIRRO
Shaxda rasmiga ah kulanka Kooxaha Real Madrid iyo Deportivo Alaves ee horyaalka La Liga oo la shaaciyey
Manchester City oo garoonkeeda Etihad guul ay u qalantay kaga gaartay kooxda Burnley… +SAWIRRO
Messi ma ka qeyb qaadan doonaa kulanka Barcelona ay bari kula ciyaari doonto kooxda Huesca horyaalka La Liga???
Dajiye April 12, 2019
(Spain) 12 Abriil 2019. Wargeyska caanka ah ee reer Spain “Mundo Deportivo” ayaa warbixin uu daabacay wuxuu ku sheegay, in kabtanka kooxda Barcelona ee Lionel Messi uu diyaar u yahay inuu ciyaaro kulanka horyaalka La Liga ay bari oo Sabti ah kula ciyaari doonaan kooxda Huesca.
Lionel Messi ayaa ka dhaawacmay sanka inta uu socday kulankii lugta koowaad wareega siddeed dhamaadka ee tartanka Champions League, kaasoo ay Manchester United ku booqdeen garoonka Old Trafford, kadib markii ay isku dheceen Chris Smalling.
Waxaa jirtay cabsi ku aadan in Messi uu ka jabay dhanka sanka, taasoo ka dhigi lahayd in ugu yaraan uu garoomada ka maqnaado mudo dhan 10 maalmood, laakiin waxay u muuqataa inuusan qabin wax dhaawac ah, kadib markii uu maray baaritaano caafimaad khamiistii shalay ahayd.
Wargeyskan oo si aad ah ugu dhuun duleela arimaha kooxda reer Catalonia ee Barcelona ayaa warbixin uu daabacay wuxuu ku sheegay inaysan jirin sabab ka hor istaagi karta Messi inuu ciyaaro kulanka bari, iyadoo uu tababare Ernesto Valverde si toos ah u heli karo adeegiisa.
Laakiin sida ay wararku sheegayaan macalinka reer Spain ee Ernesto Valverde ayaa wuxuu door bidayaa in Messi uusan ku soo bilaaban kulanka bari ay kula ciyaari doonaan kooxda Huesca horyaalka La Liga, si uu nasiino u helo kahor kulanka lugta labaad ay kula ciyaari doonaan kooxda Manchester United garoonka Cump Nou.
“Waan ku faraxsanahay soo laabashada Zidane, sababtoo ah kubadda cagta ayaa u baahnayd isaga” - Hazard
Chelsea oo war RASMI ah kasoo saartay in taageerayaasheedu ay fal cunsurinnimo kula kaceen Saalax